Shear: inona izany, toetra sy vokany amin'ny fiaramanidina | Meteorolojia amin'ny tambajotra
Portillo Alemanina | 06/04/2021 11:51 | Fisehoan-javatra amin'ny toetr'andro
Androany isika dia hiresaka momba ny iray amin'ireo trangan-javatra meteorolojika mampidi-doza indrindra amin'ny fiaramanidina. Momba ny Seara. Anisan'ireo lozam-pifamoivoizana an-habakabaka vokatry ny toetr'andro sy ny tontolo iainana. Tsy latsaky ny 10% ny lozam-pifamoivoizana vokatry ny toetrandro. Na izany aza, io trangan-javatra io no antony faharoa, ao ambadiky ny ranomandry, izay miteraka lozam-pifamoivoizana.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny toetra rehetra, ny fiaviany ary ny vokatry ny fanety.
2 Toe-javatra manety ny atmosfera
3 Shear sy fiaramanidina
4 Fiovana amin'ny zoro
Ny voalohany dia ny mahafantatra ny atao hoe manety. Izy io koa dia fantatra amin'ny anarana hoe shear wind and ny fahasamihafana amin'ny hafainganam-pandehan'ny rivotra na ny lalana mankany amin'ny teboka roa amin'ny atmosfera eto an-tany. Miankina amin'ny fiheveran'ireo teboka roa ireo ny toe-java-misy samy hafa, ny tadin-tsavona dia mety ho mitsangana na mitsivalana.
Fantatsika fa ny hafainganan'ny rivotra dia miankina amin'ny tsindry atmosfera indrindra. Ny fitarihan'ny rivotra dia mandeha araky ny tsindry avy amin'ny atmosfera. Raha any amin'ny toerana misy tsindry ambany ny atmosfera, ny rivotra dia handeha mankany amin'io toerana io satria "hameno" ny banga misy amin'ny rivotra vaovao. Mety hisy fiatraikany amin'ny rivotra ny fanapahana rivotra hafainganam-pandehan'ny fiaramanidina mandritra ny fiaingana sy ny fipetrahana mampidi-doza. Tsy maintsy tadidina fa ireo dingana roa sidina ireo no mora tohina indrindra.
Ny gradien-drivotra dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ireo tobin-dalamby ireo. Izy io koa dia singa iray manjakazaka mamaritra ny hamafin'ny tafio-drivotra. Miankina amin'ny tondra-drivotra, ny hafainganana ary ny tsindry avy amin'ny atmosfera, azonao atao ny milaza ny hamafin'ny tafio-drivotra. Fandrahonana fanampiny dia ny fikorontanana izay matetika mifandray amin'ny fanety. Misy ihany koa ny fitaomana amin'ny fivelaran'ny siklon tropikaly. Ary io fiovan'ny hafainganam-pandehan'ny rivotra io dia misy fiovana amin'ny toetr'andro maro.
Toe-javatra manety ny atmosfera
Andao hojerentsika hoe inona ny toe-javatra iainana atmosfera lehibe izay mety ho hitantsika amin'ity tranga toetrandro ity mandritra ny fiaramanidina na amin'ny atmosfera tsotra fotsiny:
Rafitra sy rafitra eo anoloana: Ny tadin-drivotra manan-danja dia azo jerena rehefa 5 degre na mihoatra ny fahasamihafana eo anoloana. Tokony hifindra eo amin'ny 15 knot hafainganana na mihoatra ihany koa izy io. Ny laharana dia fisehoan-javatra izay miseho amin'ny lafiny telo. Amin'ity tranga ity, ny tadivavarana miatrika dia azo jerena amin'ny haavo rehetra eo anelanelan'ny velarana sy ny tropopause. Tsaroantsika fa ny troposfera dia faritry ny atmosfera anaovana trangan-javatra meteorolojika.
Sakana hisosa: Rehefa mitsoka avy any amin'ny lalana mankany an-tendrombohitra ny rivotra, dia misy tsilo mitsivalana hita eo amin'ny tehezana. Fiovana amin'ny hafainganam-pandehan'ny rivotra izany satria mirona miakatra akaikin'ny tendrombohitra ny rivotra. Miankina amin'ny tsindry avy amin'ny atmosfera amin'ny hafainganam-pandehan'ilay rivotra nentina tamin'ny voalohany, dia afaka mahita fiakarana hafainganam-pandeha bebe kokoa na kely kokoa isika.
fampiasam-bola: Raha amin'ny alina mangatsiaka sy mangina isika, dia miforona eo an-tampon'ny tara-pahazavana. Ity inversion ity dia manondro fa ny mari-pana ambonin'ny tany dia ambany amin'ny ambonin'ny tany ary avo kokoa amin'ny haavony. Tsy misy fiatraikany amin'ny rivotra eo amboniny ny fifandirana. Ny fiovan'ny rivotra dia mety ho 90 degre mankany amin'ny lalana ary mahatratra 40 knot ny hafainganana. Ny onja ambany sasany dia azo tandremana amin'ny alina. Ny fahasamihafana amin'ny dity dia mety hiteraka olana fanampiny amin'ny sidina. Aza adino fa ny hakitroka dia singa iray manan-danja mihetsika amin'ny làlan'ny rivotra.
Shear sy fiaramanidina
Ho hitantsika ny zava-mitranga rehefa mitranga io trangan-javatra meteorolojika io ary mandeha fiaramanidina isika. Raha vao jerena dia sarotra be ny mamantatra azy. Midika i Eta fa ny mpanamory fiaramanidina dia tsy dia mora loatra ny mamantatra ireo karazana trangan-javatra meteorolojika ireo. Amin'ny faritra fiaramanidina dia voafaritra tsara ny mpanamory hoe inona ny toe-javatra manoloana an'io karazana trangan-javatra io mba hahafahan'izy ireo miomana sy afaka mandray vahaolana mahomby. Raha ny marina dia maro ny fiaramanidina manana detector fanetezana azy manokana.
Rehefa mahita faritra misy ny lalan'ny rivotra ianao miova tanteraka eo afovoan'ny fiaingana na ny fipetrahana, ny tsara indrindra azo atao dia ny tsy fanovana ny fikirakirana ny fiaramanidina ary ny fametrahana hery farany ambony. Raha misy ny fipetrahana, dia tsara kokoa ny manala ny fihetsika sy miakatra alohan'ny hidirany amin'ilay faritra. Amin'ny toe-javatra tsirairay, dia tsy maintsy ao an-tsaina fa toe-javatra sarotra ny fikirakirana azy, satria ny nervea dia mety milalao lalao ratsy ihany koa.
Ny antony mahatonga an'io trangan-javatra io dia miovaova ary misy akony amin'ny toerana misy ny seranam-piaramanidina tsirairay. Ny orograman'ny tany manodidina dia tompon'andraikitra amin'ny familiana ny onja na ny rivotra. Ohatra, any amin'ny nosy Canary, ny seranam-piaramanidina dia voadona matetika na kely noho ny fanamaivanana manan-danja ny nosy. Eto no ahitantsika fa misy trangan-javatra sasany matetika matetika ho an'ireo fiaramanidina izay miantsona amin'ireo faritra ireo.
Fiovana amin'ny zoro
Andao alao sary an-tsaina ny fiaramanidina manidina mahitsy sy mahitsy izay ao amin'ny faritra misy ny atmosfera mikoriana mankamin'ny lalana midina. Noho ny tsy fahaizany manana, ny fiaramanidina dia hijanona vetivety amin'ny hafainganam-pandeha sy ny lalan-kaleha manoloana ny Tany. Mandritra izany fotoana rehetra izany, ny onja mandaitra manodidina ny elany dia efa ampifanarahana amin'ny làlan'ny sidina, saingy hahazo singa mitongilana izy io. Hiaina fiampangana ratsy ny sela ary hosakanan'ny mpanamory fiaramanidina ny pilotra raha hianjera eo ambaniny ny seza.
Aorian'ny fidirana voalohany mankany amin'ny ilany atsinanana, mitombo ny vokatry ny angovo ary ny fiaramanidina dia mamerina ny zorony namboarina irery. Amin'izany fomba izany dia manohy mandoko amin'ny fomba mahazatra izy ireo, raha tsy ny làlan'ny sidina vaovao dia mampiditra tahan'ny razambe mifandraika amin'ny Tany. Izany hoe, mitovy amin'ny onjam-pidinana na fidinana an-tserasera izao dia misy singa miakatra ambony.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny fanetezana sy ny mampiavaka azy ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Fisehoan-javatra amin'ny toetr'andro » Seara